तालाबन्दी समस्याको समाधान होइन : प्रा. विजयबहादुर सिलवाल, अध्यक्ष नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक स�
Monday, 08.29.2011, 02:04pm (GMT5.5)
लामो समयदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्दैआउनु भएका विजयबहादुर सिलवाल राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक हुनुहन्छ । उहाँले २०३३ सालदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्दैआउनु भएको छ । हाल त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पस कीर्तिपुरमा प्राध्यापनरत सिलवाल त्यसअघि ठाकुराम बहुमुखी क्याम्पस- बीरगञ्ज, धनकुटा बहुमुखी क्याम्पस- धनकुटा र महेन्द्ररत्न क्याम्पस ताहाचलमा प्राध्यापन गर्नुभएको थियो । उहाँले यसबीचमा विषगत कार्यपत्रहरू पनि प्रस्तुत गर्दैआउनु भएको छ । प्राध्यापक सिलवाल हाल नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समस्या र अवस्थालाई उहाँले नजिकबाट बुझ्नु भएको छ । राजनीतिशास्त्री संघ नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्राध्यापक सिलवालसँग विश्वविद्यालयको वर्तमान अवस्थाका बारेमा गरिएको कुराकानीको प्रमुख अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
० उपकुलपतिको नियुक्तिसंगै त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी भयो । यस घटनालाई कसरी हेर्नुभएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उपकुलपति पद रिक्त भएको चार महिना पुगेको थियो । निवर्तमान उपकुलपति प्रा.डा. माधवप्रसाद शर्माको समयावधि सकिएपछि विश्वविद्यालय नेतृत्वविहीन भएको हो । यो भनेको निकै लामो समय हो । उपकूलपति नभएको कारणले गर्दा विश्वविद्यालयका नीतिगत र योजनागत कार्यक्रमहरू रोकिएका थिए । विश्वविद्यालयका धेरै कामहरू ठप्प हुनपुगेका थिए । शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसन्धान, सम्बन्धन र स्वीकृतिका काम विलम्ब भैरहेका थिए । छात्रवृत्ति, पदक र पुरस्कार वितरणका कामहरू रोकिएका थिए । यस्तो अवस्थामा हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अविलम्ब उपकूलपति नियुक्त गरियोस् भनेर सरकारलाई दबाब दिएका थियौं । हामीले संगठनको तर्फबाट त्रिभुवन विश्वविद्यालय मात्र होइन नेपाल संस्कृत, पूर्वाञ्चल, पोखरा, कृषि तथा वन, सुदुरपश्चिम र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय पनि अविलम्ब पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्नका लागि सरकारलाई सुझाव दिएका थियौं । सरकारले ढिलै भए पनि सबै विश्वविद्यालयहरूमा उपकुलपति नियुक्त गरेको छ । यसमा मैले सबै प्राध्यापकहरूको तर्फबाट सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छ । नियुक्त हुन भएका उपकुलपतिज्यूहरूलाई बधाइ एवं स्वागत गर्न चाहन्छु ।
जहाँसम्म उपकूलपतिको नियुक्तिसंगै त्रिविमा तालाबन्दी भएको प्रसंग छ, यसमा म यतिमात्र भन्न चाहन्छु कि- तालाबन्दीले समस्याको समाधान हुँदैन । प्राध्यापक भनेको सिंगो समाजलाई असल काम गर्न सिकाउने पंक्ति हो । यो पंक्तिले तालाबन्दी गर्न सुहाउँदैन । वार्ता, छलफल र सम्वादका शालीन विधि छन । हामीले आफ्ना भनाइ र मागहरू शालीन र प्राज्ञिक ढंगले प्रस्तुत गरी समाजको अगाडि नमूना बन्न सक्नुपर्दछ ।
० विश्वविद्यालयमा ताला त लागि नै सक्यो । अब समाधान चाँहि कसरी गर्नुपर्ला त ?
समस्या समाधानको उत्तम बाटो भनेको वार्ता र सम्वाद नै हो । म साथीहरूलाई यही बाटो अबलम्वन गर्न अनुरोध गर्दछु ।
० तपाईं विश्वविद्यालयको जिम्मेवार व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ । समस्या समाधानका लागि अहिलेसम्म कहीं कतै पहल भएको छैन ?
तालाबन्दी खोलेर समस्या समाधान गर्नका लागि हामीले पहल गरेका छौं । समस्या समाधानका लागि सांगठनिक रुपमा मात्र होइन मैले व्यक्तिगत रुपमा पनि प्रयत्न गरेको छु । वार्ताहरू पनि भैरहेका छन । केही दिन अगाडि मात्रै पनि प्राध्यापक र मन्त्रीको बीचमा वार्ता भएको थियो । वार्ताको श्रृंखला निरन्तर रुपमा जारी रहेको छ । मलाई विश्वास छ समस्या छिटै समाधान हुने छ । तालाबन्दी गरेका प्राध्यापक साथीहरूले पनि कुरा बुझ्नु हुनेछ ।
० तालाबन्दी गर्नुपर्ने कारण के होला जस्तो लाग्छ यहाँलाई ?
यसमा केही राजनीतिक कुराहरू होलान । उहाँहरूले आफनो माग प्रष्ट रुपमै राख्नुभएको छ । तर, उहाँहरूले भनेजस्तो सबै माग पूरा हुन सम्भव छैन । कतिपय मागहरू व्यवहारिक पनि छैन । तर, यसमा उहाँहरूलाई विश्वस्त बनाउन सक्नुपर्दछ । जनआन्दोलनपछि विश्वविद्यालयलाई संचालन गर्नका लागि एउटा संयन्त्र बनाइएको थियो । यसमा विभिन्न प्राध्यापक संगठनका प्रतिनिधिहरू रहेका थिए । विगतमा यही संयन्त्रले बनाएको सहमतिका आधारमा सुझावहरू लिएर उपकुलपति लगायतका पदाधिकारीहरू नियुक्त भएका थिए । तर, यसपटकको नियुक्ति प्रक्रिया त्यस किसिमको सुझाव लिने काम भएन । न त प्राध्यापकहरूसंग सल्लाह लिइयो न त पार्टीहरूको शिक्षा हेर्ने निकायसंग परामर्श नै गरियो । नियुक्ति प्रक्रियामा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूलाई उपेक्षा गरियो । प्राध्यापक साथीहरूले यस्तो महशुस गरेका हुनसक्छ । तालाबन्दी यो कारणले पनि भएको होला । तर, अब एउटा समझदारीमा आइ समस्या समाधानका लागि अगाडि बढ्नुपर्छ ।
० यसपटक उपकुलपति नियुक्ति गर्नका लागि गठन भएको सिफारिश समिति गोप्य राख्ने काम भयो भनिन्छ । समितिलाई यसरी किन गोप्य राखिएको होला ?
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा शिक्षामन्त्री सहकुलपति र प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यस्वस्था छ । शिक्षामन्त्री अर्थात सहकुलपतिको अध्यक्षतामा बन्ने समितिको सिफारिशमा प्रधानमन्त्री अर्थात् कुलपतिले उपकुलपति नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । कानुनी रुपमा नै स्पष्ट भएको प्रावधान अनुसार बन्ने समितिबारे जान्ने हक सबैलाई हुन्छ । यो पारदर्शी हुनुपथ्र्यो । यो समिति भन्ने कुरा लुकाएर लुक्ने पनि होइन । लुकाउनुपर्ने कुरै थिएन । यस प्रक्रियामा सरकारको नियत नै खोटपूर्ण रहेको देखियो । अर्को उदेकलाग्दा कुरा के भयो भने सिफारिश समितिको सदस्यमा प्राध्यापक राख्नुपर्ने थियो । तर, प्राध्यापकलाई नराखेर नेपाल सरकारको कर्मचारीलाई राख्ने काम भयो । यस्तो कहिल्यै भएको थिएन । अबका दिनमा यस्तो गल्ती कसैले पनि नगरोस् । अहिले राजनीतिक अवस्थामा परिवर्तन आएको छ । नयाँ सरकार बनेको छ, । अबको दिनमा प्राध्यापक समूहले नै सहमतिको आधार तयार गरेर समस्या समाधानका लागि तत्परता देखाउनुपर्छ । नयाँ सरकारलाई सबै कुराको जानकारी नहुने भएकाले प्राध्यापक संगठनहरूले सहयोग गर्नुपर्छ ।
० तालाबन्दी कहिलेसम्म खुल्ला त ?
परिस्थिति बदलिएको छ । त्यसैले मलाई तालाबन्दी छिटै नै खुल्ला भन्ने लाग्दछ । तालाबन्दी नखुलेर उपाय पनि छैन । विश्वविद्यालयमा दलीय भागबण्डाको कुरा गर्नु राम्रो पक्ष होइन । यसले राम्रो सन्देश दिंदैन । तर पनि राष्ट्रिय परिस्थितिलाई हेरेर त्यसको आधारमा सहमतिमा जानु राम्रो पक्ष हुनसक्छ । मैलै अगाडि पनि उल्लेख के गरिसकेको छु भने- एउटा संयन्त्रको आवश्यकतालाई स्वीकार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । विगतमा पनि यसरी नै अगाडि बढेको अवस्था थियो । विश्वविद्यालय संचालन एउटा पक्षले मात्र गर्न सक्दैन । यसमा सबै पक्षको सहयोग चाहिन्छ । प्राध्यापक संगठनहरूका बीचमा एउटा समझदारी कायम गरी विश्वविद्यालयलाई सहज रुपमा अगाडि बढाउन हामीले सबै पक्षको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैका लागि संयन्त्रको कुरा गरिएको हो । यसले पदाधिकारीहरूलाई पनि काम गर्न सजिलो बनाउँछ ।
० तालाबन्दीको कारणले विश्वविद्यालयमा भावी दिनमा के कस्तो प्रभाव पर्ला त ?
तालाबन्दीको असर विश्वविद्यालयमा नकारात्मक पर्ने निश्चित छ । यसको असर निकै लामो समयसम्म परिरहने छ । अहिले विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी भएको कारणले यसका प्रायः सम्पूर्ण काम कारवाहीहरू ठप्प हुनपुगेका छन । विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पसहरूमा पठनपाठन भएको भए पनि केन्द्रीय कार्यालयबाट हुनुपर्ने सबै प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय कामहरू रोकिएका छन । कर्मचारी र प्राध्यापकहरूको तलब रोकिने अवस्था उत्पन्न हुँदैछ । करार सेवामा रहनुभएका कर्मचारी र प्राध्यापकहरूको नवीकरण कार्यमा बिलम्व भैसकेको छ । यतिमात्र होइन त्रिवि सेवा आयोगद्वारा लिंदै गरेको उपप्राध्यापकको मौखिक परीक्षा अर्थात् अन्तवार्ता कार्यक्रम स्थगित भएका छन । यसले गर्दा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीबाट आएका उम्मेदवारहरू राजधानीमा बिचल्ली भएका छन । उनीहरू मानसिक रुपमा तनावमा परेका छन् । बन्दको कारणले गर्दा छनोट भैसकेका उपप्राध्यापकहरूले नियुक्ति पाउन सकेका छैनन । यसको जिम्मेवारी को हुने ? सर्वत्र प्रश्न उठ्न थालेको छ । साथीहरूले यो पक्षलाई गम्भीरताका साथ विचार गर्नुपर्छ ।
० यी कुराहरू अहिलेका समस्या भए । विश्वविद्यालयको समग्र अवस्थालाई सुधार गर्न तपाईंहरूले संगठनको तर्फबाट के कस्तो भूमिका खेल्नुभएको छ ?
तपाईंले राम्रो प्रश्न गर्नुभयो । हामी संगठनको तर्फबाट विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक, प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय सुधारका लागि पटकपटक पहल गरेको थियौं । यस सम्बन्धमा हामीले विश्वविद्यालय समक्ष विभिन्न मागहरू राख्यौं । योजना र कार्यक्रम दियौं । हाम्रो भूमिका दबाब दिनेसम्म हो । बाँकी काम विश्वविद्यालयको हो । यसका लागि हामी अहिले पनि लागिरहेका छौं । हामीले सरकारसमक्ष राष्ट्रिय नीति ल्याउन भनेका छौं । प्रयाप्त लगानी गर्नका लागि पनि भनेका छौं ।
० यहाँहरूको भूमिका किन प्रभावकारी हुन सकेको छैन त ?
हामीले विश्वविद्यलायको अवस्थालाई सुधार गर्न प्राज्ञिक रुपबाट गर्न सकिने कामहरू धेरै छन । जसअन्तर्गत विषगत र मुद्दागत अन्तरक्रिया, तालिम, सेमिनार, गोष्ठी हुनसक्छन । यसैगरी अनुसन्धानात्मक कार्यलाई पनि अगाडि बढाउन सकिन्छ । यस्ता कार्यहरू हामीले पर्याप्त मात्रामा गर्न सकेका छैनौं । यो कमजोरीलाई हामी स्वीकार गर्दछौं । तर, धेरथोर यस्ता कामहरू भने भएका छन । हामीले यस बाहेक विश्वविद्यालयका अन्य समस्याहरूलाई समाधान गर्नका लागि पदाधिकारीहहरू समक्ष पटकपटक ध्यानाकर्षण गराएका छौं । तर, हाम्रो संगठन दबाबमूलक संगठन हो । यो आफैमा व्यवस्थापक होइन । हामी विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक उन्नयनका लागि निरन्तर लागिरहेका छौं । प्राध्यापकहरूको पेशागत हकहितका लागि पनि आवाज उठाउँदै आएका छौं । करार सेवामा रहनुभएका प्राध्यापकहरूको समस्या समाधानका लागि हामीले आवाज उठाएका छौं । संगठनको राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रस्ताव नै पारित गरेर काम अगाडि बढाउनका लागि भूमिका खेल्दैआएका छौं । यसैगरी आंशिक प्राध्यापकहरूको बारेमा पनि एउटा सकारात्मक नीति बनाउने छौं ।
प्रस्तुतिः देवराज अर्याल